Home » Vaovao momba ny fitaterana » Manomboka manaiky ny fandoavam-bola UnionPay avy amin'ireo mpizahatany sinoa ireo taksibe aostralianina
Nanambara androany ny UnionPay International fa ny GM Cabs, iray amin'ireo mpampirisika ny fandoavam-bola amin'ny taxi ao Aostralia, dia hanohana feno ny fandoavan'i UnionPay ao anatin'izany ny Mobile QuickPass. Ny cabins GM dia nanomboka nanamontsana ny fahafaha-manaiky an'i UnionPay amin'ireo fitaovan'ny Eftpos, izay hanana fampiasa ekena feno, anisan'izany ny QuickPass, chip insert ary swipe. Ireo mpizahatany sinoa sy mpianatra mitsidika an'i Aostralia, ary koa ireo mponina sinoa eo an-toerana, dia hanana traikefa amin'ny fandoavam-bola tsaratsara kokoa rehefa tratran'izy ireo ny taxi taksiborosy GM.
Raha ny angom-baovao avy amin'ny Departemantan'ny Fizahan-tany sy ny Fanabeazam-pirenena Aostralianina dia lasa loharanom-pizahan-tany lehibe indrindra any Australia i China ary loharano voalohany ho an'ny mpianatra iraisam-pirenena. Amin'ny maha marika marika fandoavam-bola tiany indrindra ho an'ireo mpizahatany sinoa sy mpianatra any Aostralia, ekena tanteraka amin'ny tambajotram-bola rehetra any amin'ny banky ny UnionPay. Amin'ny ankapobeny, 90% ny ATM sy 80% ny mpivarotra no manohana ny fampiasana ny UnionPay any Aostralia. Manomboka amin'ity taona ity, ny Jetstar Airlines any Australia, Virgin Atlantic, ary ny tranonkala ofisialin'ny Meriton, Oak, Hyatt ary ireo vondrona hotely hafa dia nanaiky ny serivisy Payment Online Payment, izay manamora kokoa ny fikirakiran'ny tompon-karatra ny diany mialoha.
Ho valin'ny fiovan'ny tompon-karatra fahazarana mandoa, ny UnionPay International dia manohy manitatra ny fanekena ny serivisy fandoavam-bola amin'ny finday, QuickPass, any Aostralia. Hatramin'izao, 60% amin'ireo mpivarotra ao Aostralia no manaiky ny UnionPay QuickPass. Ary koa, nandritra ny fetin'ny Andro Nasionaly Sinoa (1 hatramin'ny 7 Oktobra) tamin'ity taona ity, nitombo in-2 ny habetsaky ny fifanakalozana natao tamin'ny UnionPay QuickPass any Aostralia. Ny fiaraha-miasa eo amin'ny UnionPay International sy ny GM Cab dia misy terminal terminal fandoavam-bola mihoatra ny 8,000 manaiky ny fandoavam-bola an'ny UnionPay QuickPass amin'ny dingana voalohany, ary misy terminal 25,000 manaraka manaraka vetivety. Ireo mpandray karatra UnionPay dia afaka mamandrika ny taxi amin'ny alàlan'ny rindranasa finday "Rydo" ihany koa.
Ny fanekena karatra UnionPay any amin'ny faritra Pasifika atsimo dia nitombo hatrany. Any Nouvelle-Zélande, saika 70% ny mpivarotra no mandray karatra UnionPay, ary mihoatra ny 12,000 ny terminal POS manohana ny UnionPay QuickPass. Countdown, marika fivarotana lehibe indrindra any Nouvelle Zélande, izao dia manaiky tanteraka ny karatra UnionPay ary manohana ny UnionPay QuickPass. Ireo mpivarotra toy ny magazay fanomezana Aotea Gifts sy mpivarotra fahasalamana Health Element dia nahafahana nandoa ny kaody UnionPay QR ihany koa. Ho fanampin'izany, ny karatra UnionPay sy ny fandoavam-bola UnionPay QuickPass dia misy amin'ireo firenena nosy Pasifika atsimo hafa, ao anatin'izany i Fiji sy Papua New Guinea.